मेरो टिम र योगदान नै जीतको आधारः प्रजू (अन्तर्वार्ता) – Arthik Awaj
मेरो टिम र योगदान नै जीतको आधारः प्रजू (अन्तर्वार्ता)
By आर्थिक आवाज २०७५ आश्विन ४ गते बिहीबार ०६:५१ मा प्रकाशित
अध्यक्षका उम्मेदवार, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, ३२औं महाधिवेशन
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३२औं महाधिवेशनका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजूले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुको कारण लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर प्रजूसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीको सारः
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
म बिगत १२ वर्षदेखि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमितिमा रहेर काम गरिरहेको छु । व्यवसायीको समस्या समाधान र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको गरिमालाई उच्च बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको छु । कार्यसमिति सदस्य हुँदै कोषाध्यक्ष, उपमहासचिव, हुँदै ३१औं महाधिवेसनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिरहेको छु । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ विशुद्ध उद्योगी तथा व्यवसायीको संस्था हो । म पनि एक व्यवसायी हुँ । वषौंदेखिको व्यावसायिक अनुभव मसँग छ । त्यही अनुभवलाई अध्यक्ष बनेर प्रयोगमा ल्याउने मेरो चाहना हो ।
जीतको आधार के छ ?
३२औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दिएको छु । सबै उद्योगी व्यवसायीको साथ रहनेमा पनि म ढुक्क छु । उद्योगी व्यवसायीका समस्यालाई नजिकबाट नियालेको छु । समस्या समाधानमा पनि पहल गरिरहेको छु । व्यवसायमा देखा परेका अप्ठ्यारा तथा बाधा व्यवधान फुकाउन पहल गर्नेछु र हालसम्म पनि गरिरहेको छु । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योगी व्यवसायीको सम्वन्ध अझै नजिक बनाउनेछु । मेरो टिम र मेरो योगदान नै जितको आधार हो ।
अध्यक्ष बनेपछि के गर्नुहुन्छ ?
मुख्यत करको समस्या अहिले व्यवसायीको बीचमा छ । उद्योगी व्यवसायीलाई व्यावसायिक बिमाको बारेमा पनि ज्ञान दिनु आवश्यक छ । यस समस्या समाधानको लागि सम्वन्धित निकायसँग सहकार्य गर्नेछु । लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी व्यवसायीलाई लगानी थप गर्न प्रोत्साहन गर्नेछु । पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पहल थाल्नेछु । घरभाडाका कारण व्यवसायीलाई परेका समस्या सामाधानको लागि लाग्नेछु । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको गरिमालाई अझ उच्च बनाउन तथा समग्र उद्योगी व्यवसायीको हितको लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता सहित मलाई भोट दिन म आग्रह गर्दछु । विकास निर्माण तथा राष्ट्रिय गौरवका योजनाका काम समयमा नै सम्पन्न गर्नको लागि खवरदारी गर्नेछु ।
निजी क्षेत्रको छाता संस्थाभित्र राजनीति बढी भयो भनिन्छ । के भन्नुहुन्छ ?
राजनीतिक आस्था सबैको हुन्छ । तर, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ । राजनीतिक कारणले नभई व्यावसायिक तथा बिगतका अनुभवका कारण मैले आफूलाई योग्य ठानेर उमेद्वारी दिएको हुँ ।
विजयी हुन्छु भन्ने लाग्छ ?
अध्यक्षमा निर्वाचित हुन्छु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । वियजी भएपछि मेरा प्रतिश्पर्धी साथीसँगको सहकार्य सधैं रहिरहनेछ । मतदाताको विश्वास मैले जितिसकको छु ।
तपाईं त वडा अध्यक्ष पनि हो नि ! संघको अध्यक्ष बन्न किन लोभ लाग्यो ?
जनप्रतिनिधीले जनतालाई सेवा दिने हो । जनतालाई मैले सुविधाबाट बञ्चित गरेको छैन । म २४सैं घण्टा जनताको काममा रहन्छु । यससँगै म उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानमा पनि लाग्ने छु । समय व्यवस्थापन गर्न मलाई समस्या छैन । जहाँ जसरी बसेर पनि जनताका साथै उद्योगी व्यवसायीका काम गर्न सक्छु । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्नेछु ।